စာမေးပွဲဖြေမယ့်ကျောင်းသူတွေအပေါ် အခွင့်ကောင်းယူတဲ့သူတွေကို တုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့ လူတစ်ချို့ - JAPO Japanese News
ဂါ 21 Jan 2020, 9:56 မနက်
၁လပိုင်းရဲ့ ၁၈ ရက်နဲ့ ၁၉ ရက်နေ့ဟာ ဂျပန်တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ ကျောင်းသားတွေအတွက် ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲ center မှာ တက္ကသိုလ်၀င်ခွင့်စာမေးပွဲကို ကျင်းပပေးပါတယ်။
ဒါဟာ တက္ကသိုလ်တက်တော့မယ့် ကျောင်းသားအားလုံးအတွက် မိမိရည်မှန်းထားတဲ့ တက္ကသိုလ်ကိုရောက်ဖို့ ဒီစာမေးပွဲကို မဖြစ်မနေကျော်ဖြတ်ရမှာပါ..
မြန်မာမှာတော့ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲလိုပေါ့!! ဥပမာ(မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ၊ လူမှုဆက်ဆံရေး၊ သိပ္ပံပညာ) အစရှိသဖြင့် ဘာသာရပ်အသီးသီးခွဲပြီး မေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။
ဖြေရမယ့် စာမေးပွဲက ၂ ကြိမ်သတ်မှတ်ပါတယ်။ ပထမက Center စာမေးပွဲ ဖြစ်ပြီး၊ သူက တက္ကသိုလ်တက်ဖို့ တကယ်အရည်အချင်းရှိ/ မရှိကိုစစ်တာကြောင့် ကျောင်းသားအားလုံးအတွက် အမှန်တကယ် အရေးကြီးတဲ့စာမေးပွဲပါ။
ဒုတိယအကြိမ်ဖြေဆိုရမယ့် စာမေးပွဲကတော့ မိမိသွားချင်တဲ့ တက္ကသိုလ်အလိုက် ဘာသာရပ်စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့လို့ ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲအတွက် သီးသန့်ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတွေလည်း ပေါ်လာတာပေါ့
အစိုးရကျောင်းတွေနဲ့ အဲ့လိုကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတွေမှာ ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲအတွက် အသည်းအသန် ကြိုးစားနေကြတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် ကိုယ်တိုင်တောင် သူတို့ကို “ အားတင်းထားပါ!!! ” ဆိုပြီး ပြောချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွား ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာ သေချာပေါက်အာမခံတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း နှစ်တိုင်းအဲ့ဒီလိုအချိန်ကို ရောက်လာပြီဆိုရင် ဖျက်ဆီးရေးသမားတွေကလည်း ဘယ်ကတည်းကကြံစည်ပြီး ဘယ်လိုရောက်လာကြလဲကို မပြောတတ်တော့ပါဘူး။
နှစ်တိုင်းပဲ Center စာမေးပွဲနေ့ကို ရောက်ခါနီးဆို အင်တာနက်ရဲ့ အကြောင်းကြားစာတွေ၊ SNS လူမှုကွန်ယက် တွေမှာ ဒီလိုစာ ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။
“ Center စာမေးပွဲဖြေဖို့ လာကြတဲ့ကျောင်းသားတွေကို အကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးမယ် “
ဟယ်! နောက်နေတာလား? လို့ ထင်ကောင်းထင်ရပေမဲ့၊ အဲ့ဒါကို သဘောတူကြတဲ့ မသမာသူတစ်ချို့ကလည်း SNS (facebook ကဲ့သို့လူမှုကွန်ယက်) တွေမှာ တော်တော်များတယ်ဆိုတာ သေချာနေပါပြီ။
သူတို့ပြောပုံအရကတော့ “ ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲကိုသာ နောက်ကျရင် စာမေးပွဲ၀င်ဖြေခွင့်မရတော့ဘူး။ ဒါကြောင့်မို့လို့ သူ့တို့စောစောလာကြလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့သာ Center စာမေးပွဲကိုလာကြမယ့် ကျောင်းသူလေးတွေကို ရထားပေါ်မှာ မကောင်းတာလုပ်ရင် စာမေးပွဲကြောင့်သူတို့ သည်းခံကြမှာပဲမလာ? ဒါကြောင့် အကန့်အသတ်မရှိ လုပ်နိုင်ပြီ!!! “ လို့ ရက်ရက်စက်စက် တွေးထားကြလို့ပါပဲ။
သည်းမခံနိုင်တဲ့ ကျောင်းသူလေးတွေကိုတော့ သူရဲဘောကြောင်လိုက်တာဆိုပြီး ဒေါသတကြီး လူလယ်ခေါင်မှာ အော်ကြီးဟစ်ကျယ် အရှက်ခွဲတာတွေအထိ ရှိပါတယ်။
အဲ့လို ရက်စက်စွာအနုစီးခြင်းကို ခံလိုက်ရတဲ့ ကျောင်းသူလေးတွေကတော့ စာမေးပွဲဖြေချင်စိတ် လုံး၀ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။
စာမေးပွဲအတွက် မျှော်လင့်ချက်အပြည့်ထားထားတဲ့ ကျောင်းသားတွေရဲ့ အရေးအကြီးဆုံးနေ့မှာ နှောက်ယှက်လာတဲ့ လူတွေကို ဒီအတိုင်းခွင့်ပြုထားလို့တော့ မဖြစ်တော့ဘူး…..!!
ဒီလိုယုတ်မာတဲ့ လူတွေရဲ့ ရန်ကနေ ၀င်ခွင့်ဖြေမယ့်ကျောင်းသူလေးတွေကို စောင့်ရှောက်ဖို့ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု စတင်လာပါတယ်။
အဲ့ဒီနေ့ လှုပ်ရှားမှုမှာ ပါ၀င်မယ့်သူက အ၀ါရောင်စလွယ်ကို လွယ်ပြီး ရထားစီးရပါမယ်။ အဲ့ဒီလိုအကြမ်းဘက်မှုတွေကို မြင်ရပြီဆိုတာနဲ့ ခံရတဲ့သူကို ကယ်ထုတ်ရမှာ ဖြစ်ပြီး၊ အထက်ကိုလည်း အကြောင်းကြားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုက “ Molester Radar “ (အဓမ္မပြုကျင့်တဲ့သူတွေကို ရှာနိုင်တဲ့ကိရိယာ)တီထွင်တဲ့ ကုမ္ပဏီကနေအစပြုခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအရာလေးက အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကို လူမှုကွန်ယက်မှာ အလွယ်တကူသိနိုင်ဖို့ အထောက်အကူပြုခဲ့ပါတယ်။ သေချာပေါက် ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ၀င်နိုင်ပြီး၊ ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပေးမယ့် သူတွေကလည်း စည်းလုံးညီညွတ်တဲ့အတွက်
စာမေးပွဲဖြေမယ့် ကျောင်းသူလေးတွေ ဘေးကင်းကင်းနဲ့ ဖြေဆိုနိုင်ပါပြီး။
Twitter မှာ「#withyellow」ဒီစာလုံးလေးကိုရေးပြီး အဲ့ဒီအိန္ဒြေပျက်ပြားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စာတိုတွေ တင်ကြတဲ့လူတွေလည်း များလာသလို comment ပေးတဲ့လူတွေလည်းများလာပါတယ်။
“ – အားလုံးကရုစိုက်ပါ။ ကျွန်တော်လည်းပဲ ဒီနေ့အ၀ါရောင်စလွယ်ကိုလွယ်ပြီး ရထားစီးနေပါပြီ။
အရမ်းဆိုးရွားလွန်းပါတယ်။ လူသားအချင်းချင်းတောင် မတွေး၀ံ့စရာတွေ တွေးနေကြတယ်။
တကယ်ကို အထင်သေးစရာပါ။ ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေမယ့်နေ့မှာ ဒီလိုဆင်ခြင်တုံတရားမဲ့တဲ့ကိစ္စတွေ ဖြစ်မလာဘူးလို့ မပြောနိုင်ဘူး။ တကယ်လို့ဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့ ကျောင်းသားတွေ စာမေးပွဲကိုဘယ်လိုမှ အာရုံစိုက်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး။
သဘောတူပါတယ်။ အရေးအကြီးဆုံးက ကျူးလွန်သူတွေကို လိုက်ဖမ်းရမှာမဟုတ်ဘဲ၊ ကျောင်းသားတွေ ဒီလိုအခြေအနေနဲ့ မတွေ့ဖို့ပါပဲ။ “ ဆိုပြီး လှုပ်ရှားမှုမှာပါ၀င်သူတွေကလည်း ပြောကြပါတယ်။
အောက်မှာပြထားတဲ့ပုံအတိုင်းပဲ Center စာမေးပွဲဖြေမယ့်နေ့မှာ အ၀ါရောင်အိင်္ကျီ ဒါမှမဟုတ် ဦးထုပ် ဆောင်းထားတဲ့ လူတွေကလည်း စိတ်တူသဘောတူ လိုက်လံနှိုးဆော်သတိပေးကြပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ Sex Crime တွေက အခုချိန်ထိလျစ်လျူရှုခြင်းခံရတုန်းပါပဲ။
ငယ်ငယ်ကကြားဖူးတာတွေဆို ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးတွေနဲ့ကြုံလာရရင် ဘာမသိညာမသိခံလိုက်ရတာတို့၊ ရထားထဲမှာ မိမိအဓမ္မခံနေရတာတောင် ဘာမှပြန်မပြောရဲဘဲ ငိုပြီးအိမ်ပြန်ရတာတို့ အများကြီးပဲ ကြားဖူးပါတယ်။
တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့ မိမိရဲ့ဆန္ဒတစ်ခုတည်းအတွက်နဲ့ အားနည်းတဲ့တခြားသူတွေကို ဒီလိုမျိုးအနိုင်ကျင့်တာက ခွင့်မလွှတ်သင့်ပါဘူး။
ဒီနေ့ခေတ်လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ ဒီလိုအဓမ္မအနိုင်ကျင့်ခြင်းတွေကို စိတ်မကောင်းပေမဲ့၊ ဘာမှမတတ်နိုင် လက်ပိုက်ကြည့်နေရတာတွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူအများကြီးက စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲလာဖြေမယ့် ကျောင်းသားတွေကို စောင့်ရှောက်ပေးတာ တကယ်ကို စိတ်ထဲကနေ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
၀င်ခွင့်စာမေးပွဲလာဖြေကြမယ့်ကျောင်းသားတွေ အဲ့ဒီနေ့မှာတစ်ယောက်မှ စိတ်ပျက်စရာတွေနဲ့ မကြုံရဘဲ စိတ်အေးအေးနဲ့ စာမေးပွဲကိုအာရုံစိုက်နိုင်ဖို့ ဆန္ဒပြုဆုတောင်းပေးနေမယ်………..
ဗိုက်အ၀စား ၀က်သားကြက်ဥကြော်カツ丼 Katsudon ဟင်းပွဲကြီး !!!!!!
ဂျပန်နိုင်ငံက မီးရထားကြီးပျော်ပျော်စီး ！
ရှလွတ် နဲ့ ရိုးရာဟင်းခေါက်ဆွဲ ထုတ်လုပ်နေတဲ့ Acecook စက်ရုံသို့တစ်ခေါက် ！
အင်ဂျင်နီယာ ၄ ယောက်ရဲ့ Monster အင်ဂျင်